January 16, 2020 - ThutaSone
နှလုံးလမ်းပေါ်မှအစပြုသော အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းပါရင် ဖတ်ကြည့်ပါ
နှလုံးလမ်းပေါ်မှအစပြုသော အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်း အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဆိုတာ လူတစ်ယောက်ရဲ့ အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်း၊လေးစားချီးမြှင့်ခံရခြင်း၊သြဇာအာဏာ ရှိခြင်းနှင့် ထင်ပေါ်ကျော်ကြားခြင်း၊စာပေအနုပညာ၊အသိပညာအတတ်ပညာ၊ ညဏ်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ ထိပ်တန်းကျော်ဇောခြင်း၊ ဥစ္စာစီးပွားတိုးတက်ခြင်းနှင့် တပည့်တပန်းပေါများခြင်း၊ဆွဲဆောင်နိုင်မှု့ရှိခြင်း တို့ကိုဖော်ပြသကဲ့သို့ ဖြတ်သန်းရတဲ့လူ့ဘဝရဲ့ အောင်မြင်မှု့ မှတ်တိုင်များကိုလည်း ဖော်ပြတတ်ပါတယ်။ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းဟာ သောကြာဂြိုဟ်ခုံကလည်း တက်တတ်သလို၊အင်္ဂါလွင်ပြင်နဲ့ တနင်္လာဂြိုဟ်ခုံတွေကလည်း တက်တတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ယခုတင်ပြလိုတဲ့ အကြောင်းအရာကတော့ အောင်မြင်ရေးလမ်းကြောင်းတွေထဲကနေ […]
ညီဖြစ်သူအား ဆေးထိုးသတ်သည့်အစ်ကိုနှင့်ကြံရာပါအမျိုးသမီးတို့အား မသေမချင်းကြိုးကွင်းစွပ်သတ်ရန်နှင့် ထောင်ဒဏ် ၇ နှစ်တို့ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ဖြစ်စဉ်မှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး၊ ဟင်္သာတမြို့၊ တက္ကသိုလ်အနောက်ဘက်၊ မြို့ရှောင်လမ်းတွင် ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃ ရက်၌ စစ်ကုန်းတိုက်နယ်၊ မရမ်းလေးကျေးရွာမူလတန်းပြကျောင်းဆရာကိုအေးနိုင်၏ပုပ်ပွနေသော ရုပ်အလောင်းကိုတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါအမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သေဆုံးသူနှင့်ညီအစ်ကိုဝမ်းကွဲတော်စပ်သူ ကျေးလက်ကျန်းမာရေးမှူးသန်းဇော်ကို တာဝန်ရှိသူများကမသင်္ကာသောကြောင့်ခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ရာမှ အမှုပေါ်ပေါက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်ဆေးချက်အရ […]
ဘာစီးပွားပဲ လုပ်လုပ် အဆင်မပြေသူများ ၊စီးပွားရေးတွေ ပြန်ဦးမော့ချင်သူ တို့အတွက် ဂါထာတော် နှင့် ပုတီးစိပ်နည်း
အမေဆီ မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး….
မပို့ဖြစ်လိုက်သော လစာငွေလေး သို့…..အမေ အမေတို့ မိသားစုတွေ နေကောင်းကြလါး?သားလဲကျန်းမာစွာဖြင့် တိုင်းပြည်တါဝန်တွေကို ဦးလည်မသုန် ထမ်းဆေါင်နေပါတယ် အမေ…. ညီလေးနဲ့ညီမလေး စာတွေကောလိုက်နိုင်ရဲ့လါးအမေ…. ကျနော်က သားကြီးသြရသ ဖြစ်ပီး အမေတို့နဲ့ ခွဲခွာသွားရတါကို အပစ်မတင်ပါနဲ့နော် အမေ….. သား အမေဆီ လစာမှန်မှန်ပို့ပေးတယ်နော်အမေ…. ဒီတခေါက် ရှေ့တန်းပြန်ဝင်ရင် […]
ဝင်ငွေမပြတ်စေသော ဂမ္ဘီရပိုက်ဆံအိပ်ပြုလုပ်နည်း မိတ်ဆွေအပေါင်း မင်္ဂလာပါဗျာ…။ မိမိအမြဲတစေ အသုံးပြုနေကျ ပိုက်ဆံအိပ်လေးတွေကို… အောက်က လာဘ်ပွင့်စေသောဓါတ်အရောင်များဖြင့် အသုံးပြုပေးပါ…။ ထူးခြားသိသာစွာ ဝင်သမျှငွေမြဲစေတယ်… လာဘ်ပွင့်စေပြီး ဝင်ငွေတိုးစေတယ်… ငွေကြေးအခက်အခဲတွေ ကင်းလွတ်စေတယ်ဗျာ…။ ဘာမှ အပန်းမကြီးပါဘူးဗျာ …လုပ်ကြည့်ပါ။ မိမိနေ့နံနဲ့ သင့်တော်တဲ့လာဘ်ပွင့်အရောင် ပိုက်ဆံအိပ်လေးထဲ ဖာလာစေ့၁စေ့ အမြဲတစေ ထည့်ထားပြီး […]
ပညာရှင်တွေ ဖန်တီးထားတဲ့ ကိုယ်ပိုင် လတစင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်မှာ လွှင့်တင်ဖို့ တရုတ်အာကာသ အေဂျင်စီက ပြင်ဆင်နေတဲ့အကြောင်း China Daily သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ သဘာဝလရောင်ထက် ၈ ဆ ပိုလင်းမယ့် လအတုတစင်းကြောင့် လျပ်စစ်ဓာတ်အား ချွေတာနုိုင်ပြီး လမ်းမီးတိုင်တွေကို အစားထိုးနုိုင်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီလအတုကို […]
မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင် ကြက်တောင်အားကစားမယ်လေးဖြစ်တဲ့ သက်ထားသူဇာ တစ်ယောက်ကတော့ ရေခြားမြေခြားမှာ ခြင်္သေ့မလေး တစ်ကောင်ပမာ နိုင်ငံ့အတွက် အမြဲတမ်း ရုန်းကန် တိုက်ခိုက်နေတဲ့ ကစားမယ်လေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူမဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက ကြက်တောင်ရိုက်ကို ဝါသနာပါခဲ့ပြီး ထူးချွန်တာကြောင့် မိဘတွေကလည်းမြေတောင် မြှောက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အစပိုင်းမှာ နိုင်ငံတော်အတွက် တံဆိပ်တွေများစွာ ရယူပေးနိုင်ခဲ့ပေမယ့် နိုင်ငံတော်ကအားကာက […]
ရန်ကုန်မှာ တိုယိုတာကားစက်ရုံစတင် တည်ဆောက်ပြီ သီလဝါ စက်မှုဇွုံတွင် သောကြာနေ့က တိုယိုတာ ကား တပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် စက်ရုံကို စတင် ဖွင့်လှစ်လိုက်ခြင်းဖြင့် နိူင်ငံတွင်း ကားတပ်ဆင်ထုတ်လုပ်သည့် ဆဌမမြောက် စက်ရုံဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါ်လာ ၅၂.၆ သန်းတန် စက်ရုံမှ ၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီ လမှ စ၍ ပစ်ကပ် […]
ရန်ကုန်မြို့ရှိ မြို့နယ် (၃) မြို့နယ်တွင် စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သော ကြက်သားအစိမ်းများထဲတွင် ဆယ်မိုနဲလားပိုးများတွေ့ရပြီး ထိုပိုးများမှာပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများယဉ်ပါးနေ ရန်ကုန်မြို့၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ မြောက်ဥက္ကလာပမြို့နယ် နှင့် သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်ရှိ ဈေးများတွင်ရောင်းချနေသောဗမာကြက်နမူနာ(၂၈)မျိုး နှင့် အသားတိုးမွေးမြူရေးကြက်နမူနာ(၂၈)မျိုး စုစုပေါင်းကြက်သားအစိမ်းနမူနာ(၅၆)မျိုး ကို ကြက်သားဆိုင်(၂၈)ဆိုင်မှ ဝယ်ယူ၍ အစားအသောက်နှင့်ဆေးဝါး ကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနခွဲ(ရန်ကုန်)ရှိအစားအသောက်အဏုဇီဝဗေဒဓါတ်ခွဲဌာနစိတ်တွင် ဓါတ်ခွဲစမ်းသပ်ခဲ့ရာအဆိုပါကြက်သားအစိမ်းများတွင် ဆယ်မိုနဲလားပိုးများတွေ့ရပြီး ထိုပိုးများမှာပဋိဇီဝပိုးသတ်ဆေးများယဉ်ပါးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ရကြောင်း […]